သင်လုံးဝလျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် ချို့တဲ့နေတဲ့လက္ခဏာများ
ပရိုတိန်းဓာတ်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလည်ပတ်မှုအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ပရိုတင်းဓာတ်နည်းနေမယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့လူပေါင်း တစ်ဘီလျံလောက်က ပရိုတင်းဓာတ်နည်းနေကြောင်း တွေ့နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာဖရိကနှင့် တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ ကလေး၃၀ရာခိုင်နှုန်းက ပရိုတင်းအနည်းငယ်သာရတတ်ကြပါတယ်တဲ့။
သင့်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့နေရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီကနေ့မှာ Lifestyle Myanmarကနေပြီးတော့ ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။
၁။ ဦးနှောက်ခြောက်ခြင်း (သို့) ရှုပ်ထွေးခြင်း
ကျန်းမာတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ဖို့ ပရိုတိန်းကောင်းကောင်းရှိဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သင်က တက်ကြွလှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့ခြင်း (သို့) အသစ်သောအရာတွေကို သင်ယူခြင်းအတွက် အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရရင် ဒါဟာပရိုတင်းဓာတ် ချို့တဲ့နေကြောင်း လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ dopamine, epinephrine နှင့် serotoninတို့ဟာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်ဖို့အတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ neurotransmitterတွေဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်သူတွေအတွက် ပရိုတင်းပမာဂက တစ်နေ့မှာ ၅၆ဂရမ်၊ အမျိုးသမီးတွေအတွက် တစ်နေ့မှာ ၄၆ဂရမ်နှင့် ကလေးတွေအတွက်ကတော့ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ၁၉ဂရမ်မှ ၃၄ဂရမ်အထိရှိသင့်ပါတယ်လို့ USDAကဆိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ် (သို့) ဖျားနာနေလျှင်တော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်က အိပ်မပျော်ခြင်း (သို့) အိပ်ရေးမဝသလို ခံစားရခြင်းတွေက ပရိုတိန်းချို့တဲ့မှုနှင့် ဆက်နွယ်နေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအစာမှ ပရိုတိန်းတွေက အိပ်ငိုက်စေတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်အတွက် အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်စက်အနားယူဖို့အတွက် ပရိုတင်းအတွက် ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကို အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ စားရမယ်လို့ ညွှန်ပြနေခြင်းပါ။
ကြွက်သားတွေလိုပဲ ပရိုတင်းဓာတ်အနည်းငယ်စားပေးခြင်းက အရိုးတွေကိုပါ အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတိန်းဓာတ်အလုံအလောက်မရှိခြင်းက အရိုးတွေကို အားနည်းစေနိုင်ပြီး အရိုးကျိုးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက အဓိကအားဖြင့် ပရိုတင်းက ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုနှင့် အရိုးဇီဝဖြစ်စဥ်ကို ကူညီတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တယ်လို့ Dr.Axeက ဆိုပါတယ်။
အသည်းအဆီဖုံးတာက ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကုသမှုမခံယူဘူးဆိုရင် အသည်းရောဂါ၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူတွေ၊ အဝလွန်သူတွေနှင့် ကလေးငယ်တွေမှာလည်း ဒီအရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆံပင်တွေကို Keratinပရိုတင်း ၉၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ တကယ်လို့ အာဟာရအလုံအလောက်မရရှိဘူးဆိုရင် သင့်ဆံပင်က ပါးလွှာပြီးမွဲခြောက်နေပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာက ပရိုတင်းကို ဆံပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကဲ့သို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ရပ်တန့်လိုက်လို့ပါပဲ။
၆။ အသားအရေနှင့် လက်သည်းပြဿနာများ
ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းက သင့်လက်သည်းတွေကို အားနည်းစေခြင်းနှင့် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေပြီး လက်သည်းပေါ်မှာ အဖြူရောင်အချပ်တွေနှင့် အညိုရောင်အစက်အပြောက်တွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်းကဆဲလ်အသစ်တွေကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဆဲလ်အသစ်တွေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်သေတွေကို အစားထိုးခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်ချို့ခြင်းက အရေပြားကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်အသားအရခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အဖတ်အဖတ်အလွှာတွေ ကွာခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းတွေဖြစ်နေရင် ပရိုတင်းဓာတ်နည်းနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ ကြွက်သားထု ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် အဆစ်တွေနာကျင်ခြင်း
ကြွက်သားတွေဟာ ပရိုတိန်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးရေလှောင်ကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေက ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၎င်းကို အများအားဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။ ကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ပရိုတိန်းက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
၈။ အစားအသောက် မက်လာခြင်း
တကယ်လို့ သင်ကအမြဲတမ်း ဆာလောင်နေပြီး အစားအစာနှင့် ရေကို တပ်မက်နေတယ်ဆိုရင် ၎င်းက ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသော၊ ကာဗွန်ဓာတ်မြင့်မာမှုများနှင့် သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုက သင်က ကယ်လိုရီအရေအတွက်နှင့် နှိုင်းယှဥ်လျှင် ပရိုတိန်းပမာဏနည်းပါးသော အဆင့်မြင့်ကယ်လိုရီအစာကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
ဒါက မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝမှာ တစ်ချိန်ချိန်တော့ နှင်းဆီပန်းကို ခံယူလိုတာက ရိုးရှင်းတဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းဆီပန်းရဲ့ အရောင်တွေမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတာ သင်သိပါသလား။ ဒါ့အပြင် ဒီနှင်းဆီပန်း ဘယ်နှစ်ပွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပါတယ်။ ၁။ နှင်းဆီနီ နှင်းဆီနီရဲ့...
အကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ရင်းနှီးဖော်ရွေပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က ကြင်နာတတ်ပြီး အကြံဉာဏ်တွေ အမြဲပေးပြီး ကူညီပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေချင်ရင်၊ လောကကြီးနှင့် လူတို့အပေါ် ထားရှိသော သင့်သဘောထားကို ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ဘဝနဲ့ လောကအမြင်ကို...
အစပိုင်းမှာတော့ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်ရပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူတွေမှာ အဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်မှုတွေဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲ?ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေများလာလို့ သုတေသနတွေကလေ့လာပီးရင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ 11:11မှာ ထူးခြားတဲ့သဘာဝလွန်စွမ်းအင်တွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ဝိညဉ်ရေးရာသတင်းစကားနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့ရတာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ 11:11ကို ဝိညဉ်ရေးရာနိုးထမှု လို့ဆိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော ဒီဂဏာန်းတွေကို မြင်ဖူးလား? မကြာခနမြင်နေရပြီဆို အဲ့ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး? ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. 11:11ကိုမကြာခနနေရာအနှံ့မှာတွေ့မြင်တတ်ခြင်း...